Global Voices teny Malagasy » Madagasikara: Fahapotehina noho ny rivodoza Fanele sy Eric · Global Voices teny Malagasy » Print
Madagasikara: Fahapotehina noho ny rivodoza Fanele sy Eric
Voadika ny 22 Janoary 2009 7:59 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Madagasikara, Vaovao Mafana, Voina
Vao tsy ela akory izay dia noteren'ny rivomahery Eric sy ny rivodoza Fanele andaniny sy ankilany i Madagasikara. Manahy ny ho fiantraikan'ny loza voajanahary tahaka izao ny mpamaham-bolongana eto Madagasikara raha fantatra ihany fa tena nampididoza manokana ny vanim-potoanan'ny rivodoza tamin'ny herintaona . Na dia mihahenjana aza ny toe-draharaha politika  dia maro avy hatrany ny nizara ny eritreriny amin'izay mety ho fandravana misesisesy ateraky ny voina tahaka izao.
Niditra an-tanety ny rivomahery Eric  tamin'ny alatsinainy 19 Janoary , ka nolazaina fa mahatratra 100km/ora ny rivotra nentiny tany Fanoarivo atsinanana. Ny alarobia maraina indray dia niserana an'i Morondava sy ny manodidina azy  mitondra rivotra hatramin'ny 240 km/ora ny rivodoza Fanele ny alarobia maraimbe.
Ny mpamaham-bolongna Tomavana no mamelabelatra ny fihetseham-po ankapobeny misy eto Madagasikara :
Namakivaky ny morontsiraka atsinanana @ faritra Analanjirofo sy Atsinanana ny rivomahery Eric. Azo lazaina fa manoto an'i Madagasikara indray ny setrasetran-drivodoza.
Lomelle moa mitantara fa efa noravaravain'ny rivodoza Ivan tamin'ny herintaona ny distrikan'i Fenoarivo atsinanana  (Fr). Nomarihiny moa fa efa niomana kokoa ny mpitondra fanjakana tamin'ity indray mitoraka ity raha ny manodidina ny renivohitra no jerena:
Tsy afa-midify ny fandalovan'ny rivodoza isan-taona i Madagasikara fa ny tena mety dia ny miomana @ zava-drehetra ihany[..] Niavaka tokoa ny fanazaran-tena teny Anosimahavelona raha oharina amin'ny tanàna hafa satria ny ranon'Ikopa no resaka eto. Ny fanazarana natao dia ny fomba fialana rehefa sehatry ny loza, fitondrana ny tra-boina amin'ny alalan'ny lakana, sy ny fitondrana azy amin'ny fiarabe mizotra ho any amin'ny toerana hametrahana azy ireo vonjimaika[..] Mety hihena ny tahan'ny tra-doza taorian'ity fanazarana ity satria efa tsara omana sy tsara antoka ny fiomanana.
Fanazarana famonjena voina amin'ny fiakaran'ny rano , nopihan'i Lomelle 
nampian'i Tomavana moa ny fitateram-baovao vonjimaika teo aloha fa tena nanao ny nataony tokoa ny rivodoza Fanele tamin'ny fandalovany amin'iny faritra Atsimo andrefana  iny (Fr):
Noho ny herivaikan'ny rivotra (> 260km/h), tsy nisy nitafo intsony ny trano tamin'iny distrikan'i Morondava iny.
Notombanan'ny gazety l’ Express de Madagascar fa tokony ho eo ho eo amin'ny 64 000 ka hatramin'ny 80 000 eo ho eo ny isan'ny mponina ao an-tanàna no tsy manan-tafo.
Tsy nahenoam-baovao intsony ny distrikan'i Manja hatramin'ny omaly 23h00 (20 Jan).
Nampisy fisamontan'ny rano tany amin'ny faritry Belo-sur-Mer sy Ankoba ny rivotra nentin'ny tadio.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/22/1522/
 tena nampididoza manokana ny vanim-potoanan'ny rivodoza tamin'ny herintaona: https://globalvoicesonline.org/2008/03/11/madagagascar-lessons-learned-and-relief-effort-after-the-3rd-severe-tropical-cyclone-jokwe-in-a-month/
 mihahenjana aza ny toe-draharaha politika: https://globalvoicesonline.org/2009/01/18/madagascar-massive-political-meeting-as-tension-arises/
 Niditra an-tanety ny rivomahery Eric: http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2456088,00.html
 Morondava sy ny manodidina azy: https://globalvoicesonline.org/2009/01/21/madagascar-tropical-cyclone-fanele-makes-landfall-in-the-southwest-region/
 fihetseham-po ankapobeny misy eto Madagasikara: http://tomavana.wordpress.com/2009/01/21/090121-rivomahery-fanele-menabe-atsimo-andrefana/
 efa noravaravain'ny rivodoza Ivan tamin'ny herintaona ny distrikan'i Fenoarivo atsinanana: http://as2coeur.wordpress.com/2009/01/20/apres-eric-revoila-fanele/
 tena nanao ny nataony tokoa ny rivodoza Fanele tamin'ny fandalovany amin'iny faritra Atsimo andrefana: http://tomavana.wordpress.com/2009/01/22/cyclone-fanele-a-madagascar-bilan-deja-lourd-bien-que-provisoire/